ICorolla ibalwa kwezidumile
INTATHELI YEZEZIMOTO | September 20, 2019
INHLOKO yeGumtree Auto uNunben Dixon ithe udumo yindlela enhle yokubheka ukuthi yiyiphi imoto ongayithenga.
“Uma imoto idumile, izokwazi ukudayiseka ngemali enhle futhi kujwayelekile ukuthi ibe seqophelweni eliphezulu. Abaningi bethu abazigcini izimoto ngaphezulu kweminyaka emihlanu nokuyingakho kubalulekile ukuhlale ucabanga ngemali ozoyidayisa ngayo,” kusho yena.
Izimoto ezidumile emhlabeni ngokwezibalo yilezi:
Toyota Corolla (44.1 million odayisiwe)
Ngemuva kweminyaka engaphezu kuka-50 nezizukulwane ezingu-11, iCorolla iyaqhubeka nokuba yintandokazi. Kuqagulwa ukuthi kudayisa iCorolla njalo ngemuva kwemizuzwana engu-36. Kuleli sesikhiqize angaphezu kuka-1 million. Njengemoto ethembekile yomndeni, akuthusi ukuthi idayisa cishe ikota yezibalo zokuthengwa kwezimoto kwaToyota emhlabeni.
Ford F-Series (sekudayiswe angu-40 million)
Ngonyaka odlule abantu baseNingizimu Afrika bajabule kabi bezwa ukuthi iFord F-150 eshintshwe ngabakwaSelby iyeza kuleli. Akusilona iveni nje elijwayelekile kodwa iyiveni yoqobo yase-America. Ngesikhathi eyesizukulwane sokuqala idayisa ngeminyaka yo-40s yayidayiselwa abalimi kodwa manje iyimoto edumile e-United States. Njengamanje kukhona eyesizukulwane sika-13 kanti ingenye yamaveni aseqophelweni eliphezulu akhona emakethe.
Volkswagen Golf (kudayiswe angu-33 million)
IGolf ingenye yezimoto ezijabulisa abantu ezikhona emakethe. Iyonga kuphethroli, ivulekile, ayibizi kakhulu futhi iyaheha nezinto zayo eziningi ongazengeza. Eyesizukulwane sesishiyagalombili noma iGolf 8 kulindeleke ukuthi iqale ukudayisa e-Europe ngaphambi kokuphela konyaka kodwa izithombe eziputshukile zikhomba ukuthi indlela eyakhiwe ngayo incike kakhulu kwisiyayela seMk 11
Honda Civic (kusayiswe angu-24 million)
IHonda Civic yimoto edayisayo. Ngeminyaka yo-1970s kwase kusele kancane iHonda iyeke ukwakha izimoto ngesikhathi kufika iCivic. Ukonga kwayo, ukuthembeka nokushibha ukuyinakekela kwayenza yaba yimpumelelo esikhathini lapho uphethroli wawubiza khona nokushuba kwemithetho ethinta ukongiwa kwemvelo.
Volkswagen Passat (kudayise angu-23 million)
Enye imoto yakwaVW yiPassat edumile. Iyimoto yemindeni enkulu eyaqala ukwethulwa ngeminyaka yo-1970 kodwa yadayisa kahle ngeminyaka yo-90s. Eyesizukulwane sesine yayifaniswa ne-Audi 80 noma i-A4 nokuyinto engathusi ngoba uFerdinand Piech odweba izimoto washiya kwa-Audi wajoyina iVolkswagen.
Into ebalulekile ngezimoto ezidayisa kakhulu ukuthi awuyikhaleli imali yakho. Yize ingekho sezimotweni ezinhlanu ezidayisa kakhulu kodwa imoto ethusayo ukuba kwezingu-10 eziphambili yiModel T Ford.
“Uma ubheka indlela izinkampani ezenza ngayo manje ozokwenza imoto kagesi eshibhile uzobe enze imoto ezodayisa ubuthaphuthaphu.
Ukhuza ibuya uMakhuzemoyizela
UZandi Khumalo uzothathela udadewabo uKelly izinyathelo zomthetho